के होला यो घुस प्रकरण?
हाल नेपालको समाचार घुस प्रकरणले छाएको छ। नेपाल संसारकै कुख्यात घुस्या देश भएको त सबैलाई जानकारी नै छ। नेपालमा मात्र के अमेरीकैमा पनि बाल्टीमोरका मोहन थापाले लाइसेन्स बिभागका कर्मचारीलाई लाइसेन्सको लागी पैसाले नै किनेका थिए। तर त्यो थियो अमेरीकामा। २० रुपयाको घुस लिएकोमा एक बिरष्ट प्रहरी बरखास्त भएका थिए,ति नेपाली त जेलै जान पार्यो।
नेपालमा भने घुस खाने ठाउंमा काम पाउनू भनेको भाग्यैको कुरा हो। घुस खाने ठाउमा सरुबा हुन कर्मचारीहरु तछाड मछाड गर्छन। यो नेपालीको लागी नौलो होइन। घुस्या र भ्रष्टलाई ठेगान लगाउने प्रक्रिया भने नेपालीको लागी पक्कै पनि नौलो हो। तर अब नेपालमा यो पनि नौलो हुने छाड्ने स्थीती देखिन्छ। चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्ने नेताहरू चिल्लो पजेरोमा बहिरीन्छन। यस्तो आकास पातको फरक देख्दा देख्दै पनि घुस खाएको प्रमाण भेटीएन भनेर नेपाली अदालतहरुले नेताहरूलाइ
चोख्याउने गर्थे। तर हालसालै पटक पटक मन्त्री भैसकेका चिरन्जीबी वाग्लेलाई अदालतले कमाएको पैसाको स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै पांच बर्षको लागी जेल सजाय सुनायो। सजाय सुनाएको मात्र हैन नेपाली कांग्रेसका बरिष्ट नेता अहिले जेलको छिंडीमा रात काट्दै छन। यिनकै सहपाठी खुमबहादुर खड्कापनि पून अदालत हाजीर हुने पूगेका छन। यदी चिरन्जीबीकै तरीकाले सुनुवाई भए खुमबहादूर पनि जेल गएको समाचार सुन्न धेरै दिन कुर्नू पर्दैनन।
भूपू मन्त्री मात्र त के,पदमै रहेका बर्दबाल प्रहरी पनि अखित्यारको ढोका धाउन बाध्य भएका छन। प्रहरी महानिरिक्षक रमेशचन्द ठकुरी यही हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर बयान दिए। उनी माथी सुडानको जातिय द्धन्द्ध समाधानका लागी संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ती मिसनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागी बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा ३० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । घुस प्रकरणमा नेपाल प्रहरी मुछिएको यो नौलो होइन। तपाई हामीले लाइसेन्स लिन जांदा पैसा दे नत्र लाइसेन्स दिन्न भनेको देखे भोगेकै छौं। तर यती धेरै पैसामा नेपाल प्रहरी मुछिएको यो पहिलो पटक होला।
नेपालमा घुसखोरी मौलाउनूमा कर्मचारी र नेताहरुको ठूलो साझेदारी छ। त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कतै न कतैबाट सहयोग गरिरहेका हुन्छन। यसरी भन्दा हरेक कर्मचारी,नेता र जनतालाई मुछ्न सही नठहर्ला। यस्लाई अर्थमन्त्रालयका रामेश्वर खनालले पूष्टी गरेका छन। यदी उनको दाबी र बजारमा चलेको हल्ला सही हो भने नेपालका चौधरी ग्रुप,शंकार ग्रुप,बिशाल ग्रुप आदी जस्ता मुख्य ब्यापारीक संस्थाले जनताबाट भ्याट असुलेर सरकारलाई नदीइ करौंडौ अबैध तरिकाले कमाएका छन। खनाल भन्छन यो आर्थीक अपराध हो। सरकारको कर भनेर जनताबाट लिने र सरकारलाइ नबूझाउने यो राज्स्व चुहाबाट हैन यो त डकैती हो र कानूनको हिसाबमा जघन्य अपराध हो। नक्कली भ्याट बनाएको सालाखाला हिसाबबाहिर आइसक्यो। नक्कली भ्याट बिललाई साम्य पार्न ब्यपारीक घरानाहरुले कुन कुन पार्टीलाई कती कती चन्दा दिए त्यो त ती पार्टीवाला लाई नै थाहा होला। तर आर्थीक अनिमियता गर्नेलाई अदालतले लौरो लगाइरहेको बेलामा यि ब्यापारीक घराना मूक्त रहने अबस्था छैन। अदालतले सही तरिकाले यिनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याए नेपालका प्रख्यात ब्यपारी बिनोद चौधरी मात्र होइन उनको साथ सातै बहालवाला मन्त्री भरतमोहन अधिकारी पनि जेल गएर नया नेपालमा नयै कुरा हुनेछ।
गोबिन्द राज जोशी पनि थुनिएका हुन् र? चिरन्जिबी वाग्ले चैं हुन् /
बदमासी सबै ठाउँमा हुन्छ तर नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति असल बनिदिने हो भने बिस्तारै सबै ठिक हुदै जान्छ / जब नेतृत्व नै घुसखोरी छ भने कसको के लाग्छ? नेपालको समस्या नै गलत व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नु हो / सडेको आलु संगै राख्दा ताजा पनि सडाउछ!
उनीहरुलाइ केइ पनि हुदैन। सारा पत्रकार देखी नेताहरु ढाकछोप गर्न कस्सिएर लागेका छन।
अब इनी हरुले प्रधान न्यायधिस लाई नै अपहरन गराउना बेर छैन !